Yeka ukuthi ngezinye izikhathi kunzima ukukhuluma nalaba noma ukuthi abantu! Futhi kuhle uma ungakwazi ukugwema ukukhuluma. Futhi uma kungenjalo? Uma lesi yisihlobo sakho esiseduze, umphathi noma umakhelwane? Akuyona into ecacile ukuthi kungani izixhumanisi ngabanye zisicasula kakhulu. Kunalokho, hhayi ngisho ngqo, hhayi lokho abakushoyo, kodwa okunye okungaqondakali, esikubiza ngokuthi "indlela yokuxhumana."
Futhi kuthiwani uma nathi sibacasula othile? Ngokungazelelwe, nathi sibhekene namandla okugcina, besaba ukukhuluma iqiniso, ukuze singacasuli? Futhi ngingenzani ukulungisa lokhu? Ngakho-ke, le nqubo: kungakhathaliseki ukuthi ungumkhulumeli othakazelisayo - isihloko senkulumo yanamuhla.
Ngokwezibalo zengqondo, bonke abantu, uma sibheka njengama-interlocutors, bahlukaniswe zibe izinhlelo ezimbili zokuxhumanisa: i-interlocutor inamandla futhi ayinamandla, futhi i-interlocutor ephathekayo futhi eqinile. Ngakho, ngamunye wethu unezici ezimbili zendlela yokuxhumana, ngezixhumanisi ezimbili. Isibonelo, uma ungumuntu ophethe futhi ohambahambayo, khona-ke awukwazi ukuxhumana ngokujwayelekile nomuntu oqinile futhi ongekho obala.
Okukhulu noma okungewona okubalulekile?
I-Interlocutor inamandla kakhulu, awuyikudideka nanoma ubani, futhi-ke, abantu abanjalo okungenani ngezinye izikhathi bahlangabezana nokuphila kwakho. Kakade emva kwemizuzu embalwa yokuxhumana unomuzwa wokuthi i-interlocutor "kakhulu", ukuthi ubonakala ungaphansi kwengcindezi. Uqala ukukhulisa ngokungahambisani ibanga phakathi kwakho, kodwa i-interlocutor ekhuthele ifuna ukuyinciphisa. Leyo ndlela yokukhulumisana kwe-interlocutor ephezulu: esebenzayo, eqinile, eqinile. Uma edinga ukubhekana nawe ngento ethile, ngakho-ke akakhathazeki kakhulu nge-"ayikwazi", "elula-engakhululekile" noma "ukuqonda-ayiqondi". Uma ngokungazelelwe unesidingo sokumbuza umbuzo, akusilo iqiniso lokuthi ucabanga ukuthi kuyadingeka ukuphendula. Enkulumweni yengxoxo, i-interlocutor iphazamisa njalo, eshaqisayo ngendlela ephakanyisiwe, engaphezu komzwelo, ukumemeza noma ukukhuluma nawe akunakwenzeka ukuba uphumelele. Ngezinye izikhathi usebenzisa enye indlela - ngokuzumayo uyeka ukukhuluma, ekuphoqelela ukuthi uphinde uphinde uphendule izimpikiswano zakhe izikhathi eziningi futhi ulahlekelwe ngokuqagela, kungakhathaliseki ukuthi uzwakala yi-interlocutor, ngabe uyakuqonda yini. Kubonakala kuwe ukuthi awunikezi izingxabano ezifanele.
Njengoba le ndlela ibonisa, lo muntu okhulumela lolu hlobo engxoxweni ngokuvamile uvumela ukuhleka usulu noma ukunyanyisa, akasoze avuma ukungalungi kwakhe. Ngisho nalapho ekudumisa, wamukela izimpikiswano zakho (njalo njalo ngokomzwelo), khona-ke lokhu nakho ukubonakalisa amandla akhe. Kodwa uma futhi u-interlocutor ovelele, isimo singaba nzima nakakhulu. Kulokhu, ingxoxo yakho ingaqeda ukuxabana, kunoma yikuphi, kuyoba nzima nakakhulu ukuba ungenele. Kodwa nokho i-interlocutor ephezulu inezinzuzo ezimbalwa. Ziyi-rule, izikhulumi ezinhle kakhulu, ziyakwazi ukukholisa nokuhola. Bangakwazi ukwenza izinqumo masinyane ezimweni ezinzima futhi banakekele isimo.
I-interlocutor engekho ebusayo, njengokulula ukuqagela, yiyona ehlukile ngokuqondile kohlobo olwedlule. Uhlale ezwa enecala uma kudingeka ukuphendukela komunye umuntu, futhi ngokuzumayo umbuzo wakhe uzozwakala ungacabangi noma ungalungile. Kungcono ukuthula nhlobo, ubhekisela kwabanye ngokuncane ngangokunokwenzeka. Uma wena ngokwakho ukhuluma nomuntu ongekho obala, uzosabela kuwe ngokushesha, ukuze angacasuli noma afune ukuphendula kwakhe okusheshayo. Ukudla okunjalo kuvame ukwamukelwa yizi-interlocutors ezingafani. Kodwa-ke, uma unamandla, ngale ndlela indlela yokukhulumisana izokubangela ukucasuka kuphela. Uyothukutheka ngokungahambi komunye umuntu, ukuhlazeka njalo, ukuthuthumela nokulalela ngokuphelele. Kuphela uma kwenzeka ingxoxo enokuthula (ingenayo eyinhloko), i-interlocutor iba nesibindi, ngisho ngezinye izikhathi iphazamise futhi ivikela iphuzu lakhe lokubuka. Ukuxhumana nabangewona obala kungenza kube nokukhiqiza ngangokunokwenzeka, kufanele akhuthazwe ngaso sonke isikhathi, hhayi ngamazwi, kodwa ngezindlebe nokungahambisani.
Iselula noma eqinile?
I-interlocutor yeselula ihlale ilula ukubandakanyeka kunoma iyiphi ingxoxo futhi kulula ukuphuma kuyo. Umuntu onjalo angashintsha kalula okuthile okuthakazelisayo kakhulu kunayo yonke, ngokubona kwakho, isikhathi esingekho emthethweni. Ngokungazelelwe uqaphele ukuthi amehlo omuntu onesithakazelo esikhulu kuwe ngokungazelelwe abe "engenalutho." I-interlocutor ephathekayo ibonakala ngokukhulumisana okusheshayo, ngezinye izikhathi akuqondi ngaso sonke isikhathi, futhi ukubonakala kobuso bakhe kuyashintsha ngejubane elimangalisa. Inkulumo yalabo abakuzungezile ibonakala ihamba kancane, ihlala ikushaya, ikuphazamisa. Uma ungazi ukuthi ungabonisa kanjani ngokucacile futhi ngokushelelayo, awuyena umxhumanisi omnandi kakhulu kuye, futhi ungaletha i-interlocutor ephathekayo ukuphazamiseka kwemizwa. Uzocasulwa, ahlasele, zama ukufika isikhathi eside kakhulu noma uzame ukukuqedela isigwebo.
Enye into ukuthi i-interlocutor inzima. Udinga umoya okhethekile ukuxoxa nawe. Futhi, akuxhomeki kumlingiswa - kungaba umuntu oqinile futhi onokwanele. Isici esiyinhloko se-interlocutor eqinile siqinile. Uma ecabanga ngento ethile ngesikhathi sokuqala kwengxoxo yakho, khona-ke udinga isikhathi esincane sokucabanga ngombono. Kodwa uzokulalela ngokucophelela, akhulume ngaphandle kokusheshisa, echaza imicabango yakhe nendlela eya kuzo. Imishwana ye-interlocutor eqinile ngokunembile ngangokunokwenzeka. Ngezinye izikhathi nawe unomuzwa wokuthi i-interlocutor icabanga ukuthi owezwayo uya kancane kancane kuwe. Lokhu akunjalo, abantu abanjalo nje bangaphinda bafunde amagama athile izikhathi eziningana kuphela ngenjabulo yabo. Ungalokothi uphazamise i-interlocutor eqinile! Akakubekezeli lokhu, nakuba yena ngokwakhe akasoze akuphazamise. Ukuxhumana nomuntu onzima kunzima ukuvusa amadlingozi, ikakhulukazi uma uhlobo lweselula wena.
Abakwa-Interlocutors, njengoba bethi, ungakhethi. Kodwa ekuchazweni kwezinhlobo zabo kuzohlale kusiza inqubo, umphumela omuhle wokuthi - ukukhulumisana okujwayelekile kanye nokufezeka kokungqubuzana. Ngisho nama-interlocutors angathandeki kakhulu akusikhathi njalo ukugwema ukukhuluma, ngakho okuwukuphela kokukhetha ukulungisa. Futhi futhi: ungathathi indlela yokuxhumana we-interlocutor ku-akhawunti yakho. Kulokhu, njengoba bethi, "akukho lutho lomuntu siqu." Ngempela, i-interlocutor ephezulu, ephakamisa izwi lakhe futhi ephazamise, akafuni neze ukukucasula, futhi eqinile, ephindaphinda into efanayo izikhathi eziningana, akanalutho ngokumelene nawe.
Psychology: kanjani ukunqoba ukwesaba kwakho?
I-psychology yokuhlukanisa nabathandekayo bakho
Izintombi ezinomona - injini enkulu yentuthuko
Intombazane ingasabela kanjani ekuncoma ngendlela efanele?
Ukuzihlonipha kanye nendima yayo ekuthuthukisweni komuntu siqu
Ubudlelwano phakathi kwabesifazane nabesilisa
I-Energy strawberry cocktail
I-Cocktail "Margarita" nge-peach
Isibikezelo sezinkanyezi sokukhashelwa komuntu
UMaxim Averin waba nguyise: isithombe senkanyezi "Sklifosovsky" nomkakhe nengane yakhe
Ikhekhe "Ingilazi ephukile"
Amathiphu ahlangene: uboya uhambo
Isaladi "Isiqalo Sehlobo"
Yikuphi ukwesaba okuhlukumeza indoda ngocansi?
Ukuzivocavoca umzimba wokulahlekelwa isisindo ekhaya
Ukudla kwabantwana ezinyangeni ezingu-7 ubudala
Ilayisha usuku ngosuku lwe-cottage shizi
Ingabe ama-diapers ayingozi ngomfana?
Amapaletti ezinwele zezinwele Loreal, Estelle noGarnier
Unganelisa kanjani ucansi: ukushaya indlwabu